ရှိပါတယ်နေစဉ်၊အများအပြားအစက်အပြောက်အဘို့အထွက်ရှိပါတယ်အပြာအွန်လိုင်း–ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူဒီအချက်ဖြစ်ပါသည်–ဝမ်း၊ဘီရွည္ pickings မှကြွလာသောအခါအအရွယ်ရောက်ပြီး။ ဘာကြောင့်လူကြိုက်များလိင်ဂိမ်းများနေရာမှာဖြစ်ပါသည်:ကျနော်တို့အလုပ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပတ်ပတ်လည်သင်သာရတဲ့အဝေဖန်ကောင်းချီးလွှတ်ပေးလိမ့်မယ်အတူမေတ္တာ၌လဲကျ၊အဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ။ ကျနော်တို့ကိုရှာနေချင်တာလဲဆိုတာနှင့်အတူလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စနှင့်တကွသင်ပေးအကောင်းဆုံးသောကြှပတ်ပတ်လည်ကောင်းပါပြီ–သင်ကမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်တိုင်းခဲ့သည့်ဒုတိယအရာကိုကယ်နှုတ်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကသင်အတွင်းအပြင်။, အစားထုတ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြန့်ချိ၊ကျွန်တော်လိုင်စင်အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးအခြားအုပ္ဆုိင္နိုင်အောင်အကွာအဝေးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပိုကောင်းသေး၊ဟိုတည္ေနရာကစားရန်အတွက်သူတို့အားလုံးကို။ ကျွန်တော်ထင်ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်ဒီသည်အနာဂတ်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းနှင့်အင်း–သင်ဖူးမြင်ရှေ့တော်၌ဤကဲ့သို့သောတစုံတခုကိုမျှ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတူသင်တို့ကိုတက်ချိတ်အယံ smut သင်အလိုရှိသောအဘို့နှင့်ဘယ်တော့မှပြန်ကြည့်အပေါ်စံဗီဒီနောက်တဖန်အသင့်ရဲ့အရင်းအမြစ်။, လူကြိုက်များလိင်ဂိမ်းများအားလုံးအကြောင်းပါသော:အကောင်းဆုံး XXX အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအပြန်အလှန်အာရုံစိုက်သင်တာမဟုတ်သွားနိုင်မှချ။
အစားထုတ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်း၊ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ပိုကောင်းင်၊ရှေ့ဆက်သွားနှင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အကွာအဝေးများ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှျဖင့္ခရီးနှင့်အခြေခံဖြစ်တဲ့ပြတိုက်ဘယ်အရာ၏အကောင်းမယ့်။ စဉ်းစားပြီးအဖြစ်ကဲ့သို့ရေနွေးငွေ့၊သာအကြီးမားဆုံးအားသာချက်ကကျနော်တို့ရှိသည်သောရိုးရှင်းသောတကယ်တော့အရာအားလုံးလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်အင်း–ဒါကတော်တော်အေးမြလျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်း! ဒီစသင်ရတာပေါ့အများကြီးတစ်ငရဲအကြောင်းအရာ:နံပါတ်များကိုဒီမှာသေဖို့အဘို့အ!, လောလောဆယ်ပေါ်မှာထိုင် ၇၀ ကျော်ကနေ ၂၅ ကွဲပြားခြားနားသောယို–နောက်တဖန်အ၊ငါတို့သည်သာကောက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်အကောင်းဆုံးလျှင်တစ်ခုခေါင်းစဉ်ကိုတက်မရှငျပါဘူးအအဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့ဟာကျဆင်းတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ကြောင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အကြောင်းဆိုရင်ရတယ်ကြပြီမဟုတ်အလားအလာ၊ထုတ်ကုန်၊ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးစိတ်ဝင်စားမဟုတ်။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြု–ပတ်လည်ကြည့်ရှုရန်သေချာစေအပြည့်အဝနှစ်သက်၏လိင်ဂိမ်းများနှင့်ကြိုးစားထွက်အဖြစ်အများအပြားဂိမ်းများအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ကျနော်တို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းအခြေစိုက်စခန်းနှင့်တွန်းအားပေးလိမ့်မည်အသစ်ထေးသောအခါသူတို့ရရှိနိုင်င့်သောအတွင်း ၄၈ နာရီ။, ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်တော်တော်အများကြီးအစဉ်အမြဲရတဲ့ကိုနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနဲ့အဘို့အကောင်းမယ့်အဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ချင်ကြဘူးသောခေတ်ညမ်းဂိမ်း!
သင့်ရဲ့အဆင်ပြေစေရန်၊တဦးတည်း၏အဆင့်ဆင့်သောလူကြိုက်များလိင်ဂိမ်းများကြာများအတွက်လုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်အကျိုးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအပေး၏အားလုံးဂိမ်းများကိုသင်ကနေတဆင့်။ ဒီအမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဤတွက်အခုအချိန်မှာ Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ၊ခင်ဗျားသွားကောင်းဖြစ်သွားနှင့်အတူအားကစားပြိုင်ပွဲများကို! အဲသည်အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ဗားရှင်းပြတင်းပေါက်များလျှင်သင်အမှန်တကယ်ချင်ဒေသခံသိုလှောင်မှုအရာတစ်ခု၊ဒါပေမဲ့ဒီခြင်းကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မည်အစိုးဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်နှင့်ငါတို့ပြုချင်အများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအသုံးပြုရန်၎င်းတို့ဘြတ္ေဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်။, အရေအတွက်ရှိပါတယ်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုဤချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ၊အထင်ရှားဆုံးခံရနိုင်ရှုဝန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအခါသူတို့ကိုသင်လိုအပ်၊ဒါကြောင့်သင်ဝန်မည်သည့်ဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့အဖို့ရာပူဇော်သက္ကာနေအသင်နှင့်ကစားဒါဟာတော်တော်အများကြီးချက်ချင်း။ သင်လည်းမစွန့်ဗိုင်းရပ်စ်ခံရပါကက်မ၏ပြဿနာကိုအခြားသူတစ်ယောက်ပါတီႏုိင္ငံေတဆင့်သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုနှင့်အမြင်အဘယ်အရာကိုသင်ရှာဖွေနေခဲ့ကြရတယ်။, ကျွန်တော်ထင်လူကြိုက်များလိင်ဂိမ်းများလည်းအစွန်းနှင့်အတူအရာက္ဇာချဉ်းကပ်သောကြောင့်ထိုသို့ဆိုလိုကြောင်းသင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအပေါ်နဲ့ Linux စနစ္မ်ား၊အဖြစ်ကခေတ်သစ်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်ရဲ့လျှင်ပိုသင့်ရာ။ အဘို့ကိုထုတ်ရှာဖွေနေအားလုံးဂိမ်းကစားထွက်ရှိပဲအများဆုံးအာရုံစေသည်၊မှန်သော? ငါတို့သည်လည်းကယ်တင်အပေါင်းတို့၏သင့်ရဲ့ဖိုင်တွေကိုအတိမ်၊ဒါကြောင့်သင်အကြားပြောင်းလဲထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုဝွက္ကုဒ္ကိုအချက်အလက်မရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများသို့မဟုတ်အနာ။ တော်တော်ချိုမြိန်!
နေတယ်ဆိုရင်စိတ်အားထက်သန်ထွက်ကြိုးစားဖို့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပစ္စည်းပစ္စယများနှင့်ပိုပြီး၊ယခုအခမဲ့အကောင့်ဖွင့်အပေါ်လူကြိုက်လိင်ဂိမ်းများအဖြစ်လျင်မြန်စွာတတ်နိုင်သမျှ။ ကျနော်တို့ဒါကြောင့်အသည်းအသန်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယာဉ်နဲ့အလိုအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှများစွာသောလူကိုမြင်ရဖို့ကိုယ်တိုင်အတွက်အဘယ်အနာဂတ်အရွယ်ရောက်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်အပြာစွဲလမ်းဂိမ်းကစားနှင့်အတူအားလုံးသည်မီဒီယာများ၏ပူဇော်ဒီမှာ၊သင်တော်တော်အများကြီးအာမခံသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းသည်မရှိပိုကောင်းတစ်ခုတည်းဦးတည်ရာအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစား။ ထို့ကြောင့်၊လက်ျာဘက်အရာလုပ်ဖို့လာတဲ့အရာကိုကြည့်ရှုရန်ရရှိပါသည်ဒီမှာကမ်းလှမ်းမှုကို–သင့်ရဲ့ကြက်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်သင်အကြာတွင်!